Home Wararka Maxaa kasoo baxay kulankii R/W Rooble iyo dhigiisa Imaaraadka Carabta?
Maxaa kasoo baxay kulankii R/W Rooble iyo dhigiisa Imaaraadka Carabta?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magaalada Dubai kula kulmay Madaxweyne ku-xigeenka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ahna Ra’iisul Wasaaraha dalkaas, Maxamed Bin Raashid Ala-Maktoum.
Kulanka labada mas’uul ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo iskaashiga labad dal, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha, dhoofka xoolaha Soomaalida ee loo iib geeyo dalka Imaaraadka Carabta.
Sidoo kale waxay si gaar ah diirada u saareen sida ay xiligan lagama maarmaan u tahay sidii dal-kugalka (Fiisooyinka) loogu fududeyn lahaa Soomaalida u safarta dalka Imaaraadka Carabta.
Ra’iisul Wasaaraha Imaaraadka Sheikh Maxamed Bin Raashid ayaa ballan-qaaday in dowladdiisu kordhin doonto gar-gaarka la gaarsiinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay.
Ugu dambeyntiina Rooble ayaa dhiggiisa Imaaraadka Sheikh Maxamed Bin Raashid uga mahad-celiyay kaalinta dowladdiisu ay ka geysatay gurmadka abaaraha ee dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Abu Dhabi.
Si kastaba, booqashada Ra’iisul Wasaaraha ee dalka Imaaraadka ayaa markale dhidibada u taageysa xiriirka u dhaxeeyay labada dal, oo muddooyinkii dambe uu ka jira mad-madow badan, waxayna ku soo aadeysa xilli xasaasi ah oo ay is hayaan madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday oo garab ka hela dowladda Qatar.
Previous articleKhasaare ka dhashay dagaal ka dhacay Galguduud
Next articleDhacdo ugub ku ah doorashada kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhacday Hoolka Doorashada ka socota magaalada jowhar
[Deg Deg] Madaxweynihii Tanzania John Magufuli oo geeriyooday